I-Urbe Immobiliare Agency - uMessina
NgoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu:
NgoMgqibelo ekuseni: 10: 30-12: 30
Iminyaka engama-30 Eqala Emakethe Yezindawo Nezindawo eMessina
4.8 /5 amavoti (amavoti angama-4)
I-Urbe Immobiliare Agency , kwi-avenue ISt. 71 a Messina, 'I-ejensi yezentengiso okuyinto, engaphezu kweminyaka engama-30, ibisebenza nayo Ukuthengwa Kwezezakhiwo e Ukuqashwa Kwezezakhiwo kuyo yonke indawo yaseMessina. Isikhungo I-Urbe Immobiliare iyasebenza Ukubonisana, Izilinganiso kanye Nezikweletu nge-Senseness ne-Professionalism yokuhlangabezana nazo zonke izidingo zalaba abafuna Ukuthenga, Ukuthengisa noma Ukuqasha Impahla. L'Isikhungo I-Urbe Immobiliare inikezela amakhasimende izinsizakalo ezingcono kakhulu zezezimali, ngenxa yezivumelwano ezibalulekile zebhange eziqinisekisa abasebenzisi izimo eziphezulu kakhulu zemakethe.
I-Urbe Real Estate Agency eMessina - Sekuyiminyaka engama-30 Ukuthengiswa Nezindlu Zokuqashwa Kwezezakhiwo
I-Urbe Immobiliare Agency, a Messina, kusukela ngo-1982 uphendula ngezidingo zalaba abafuna Ukuthenga, Ukuthengisa noma Ukuqasha Impahla, ngekhono nobungcweti obukwenzile kwaba yiphuzu lokurekhoda kwangempela eminyakeni yamuva Messina kanye nesifundazwe. Isikhungo Esibekelwe Ukuthengiswa Kwezezakhiwo I-Urbe, esebenzisana nezingosi ezidume kakhulu emkhakheni njenge I-Immobiliare.it, isebenza kuyo yonke indawo yaseMessina, kusukela esiQhingini sase-Aeolian kuya eTaormina, futhi inakekela ukulamula ukuhweba, noma ukuqasha, of Izakhiwo Nezindawo Zokuhlala, Izakhiwo Zokuhweba Nezindawo Zomhlaba kukhethwe ngokucophelela. Ngenxa yolwazi oluhlanganisiwe olutholwe eminyakeni engama-30 yokuba khona emkhakheni wezentengiso nokuqashwa, nge-Urbe Immobiliare ejensi ungaqiniseka ngenkonzo eyenziwe ngobuchule obukhulu nobuchwepheshe.
I-Urbe Immobiliare Agency - Iqembu Lokunqoba!
I-Urbe Immobilire Agency, kwi-avenue ISt. 71 a Messina, ukuqhosha kweqembu le- I-ejensi yezentengiso enziwe ngabeluleki abaqeqeshiwe kakhulu abalandela ikhasimende ngokungathí sina okukhulu nangobungcweti kuzo zonke izigaba zokuthengiswa. Ukuxhumana nethimba le-Urbe Immobiliare kusho ukukhetha insiza ephelele nesebenzayo: ekutholeni impahla evumelana nezidingo zakho ekuthengeni, noma ekuqashweni, njalo egameni lobuciko, ubuchwepheshe kanye nokusobala.
I-Urbe Immobiliare Agency - yenza lula impilo yakho!
Isikhungo I-Urbe Immobiliare eMessina, kukusiza emsebenzini onzima wokuthola ikhaya lakho elifanele, noma impahla efanelekile ongayenza kuyo ibhizinisi lakho. L 'I-Urbe Real Estate Agency yenza Ukubonisana Okomuntu siqu, ama-Appraisals nama-Revenue ukuze uhlangabezane nezidingo zakho nezidingo zakho. Umeluleki Wokuthengiswa Kwezezakhiwo uzokulandela zonke izinyathelo zendlela zokukusiza ekutholeni isisombululo esifanele kakhulu. Uchwepheshe onolwazi uzokuqondisa ekukhetheni Ukuthenga, Ukuthengisa noma Ukuqasha Impahla (okuyinto eyodwa ikhaya noma isakhiwo) ekahle ngokusebenzisa i-Advisity uqobo. Ithimba le-Urbe lifaneleke kakhulu futhi ekwenzeni ama-appraisals nokweluleka ngokuqala ukwebiwa kwempahla.
I-Urbe Immobiliare Agency eMessina - Ukuphepha obekufuna!
Isikhungo I-Urbe Immobiliare, a Messina, yisixazululo esifanelekile uma ufuna indlu yamaphupho akho: kungaba yifulethi eMessina, noma i-villa ngasolwandle, Abacebisi Bokuhweba Ngezindlu zase-Urbe bazokwazi ukukuqondisa endaweni evumelana nawe ngokuphelele! L 'I-Urbe Real Estate Agency yenza kutholakale kulabo abafisayo Ukuthenga, Ukuthengisa noma Ukuqasha Impahla konke okuhlangenwe nakho kwe-ejensi kusuka phesheya Iminyaka engu-30 emkhakheni Wezakhiwo Nezindawo, bonke ubuchwepheshe kanye nekhono leqembu labeluleki Abathengiswa Abathengiswa Kwezezakhiwo kanye nokuphepha kokwethembela esikhungweni esiqinile nesingathi sína.
Ikheli: UViale S. Martino, oneminyaka engama-71
Ucingo: 090 2926036
Umakhala ekhukhwini: 090 2926037
Inombolo ye-VAT: 01369920838